Biljamka: Nin Soomaali ah oo Faash ku Weerraray Askar........
BILJAMKA: Soomaali Faash Ku Weerarray Askar Oo La Toogtay
Belgium (Dhamays) – Nin Soomaali ah ayaa la toogtay, ka dib markii uu Xalay faash ku weerarray Askar u dhalatay dalka Belgium, kuwaasoo ku sugnaa caasimadda Brussels.
Dacwad oogayaasha dalkaasi ayaa weerarka ku tilmaamay mid argagixiso.
Ninka weerarka fuliyay oo da’diisa lagu sheegay 30 jir ayaa markii dambe ku dhintay cisbitaal lagu daweynayay.
Mid ka mid ah Askarta uu bartilmaameedsaday ayaa gacanta uu dhaawac kasoo gaadhay.
Booliska iyo Milateriga Belgium ayaa xidhay goobta uu weerarka ka dhacay, oo lagu magacaabo Boulevard Emile Jacqmain, kuna taalla badhtamaha caasimadda Brussels.
Xafiiska dacwad oogaha federaalka Belgium ayaa sheegay in ninka weerarka fuliyay aan lagu aqoon “taageeridda argagixisada,” aanu ku dhawaaqayay Allahu Akbar markii uu weerarka fulinayay.
Milateriga dalkaasi ayaa ka qeyb qaadanaya sugidda ammaanka Belgium, gaar ahaan caasimadda Brussels tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii halkaa ka dhacay bishii March 2016, kaasoo ay ku dhinteen 32 qof.
Caasimadaha Yurub ayaa heegan ku jira, iyadoo laga casbi qabo in ay xilli kasta ay ka dhici karaan weerarro argagixiso.
Previous: Wasiir SAMSAM Oo Ka Hadashay Ballan-qaadyo Siilaanyo U Sameeyay Reer Wajaale
Next: Duufaan Saacaddiiba Jaraya 215KM Oo Ku Dhuftay Gobol Maraykanka Ah